Afa-po tanteraka ireo mpankafy jazz tamin’ny fampisehoana natao tetsy amin’ny kianjan’ny kanto etsy Mahamasina, ny asabotsy lasa teo. Hetsika tafiditra ao anatin’ny “Festival Madajazzcar” andiany faha-30. Talenta maro, avy eto an-toerana sy avy any ivelany, no nifandimby niaka-tsehatra, nahafahana naka “tsirony” amin’ireo fironana samihafa, izay samy ao anatin’ny valan’ity mozika ity avokoa. Hita taratra fa mihamaro koa ny Malagasy mankafy jazz.
Feo manga narahin-javamaneno mirindra no nanakoako, tetsy amin’ny IFM etsy Analakely, omaly tolakandro. Nampihetsi-po sy nahafinaritra ity fampisehoana, nentina namarana ny hetsika “Cris de Tana”, ity. Raha tsiahivina, efa herinandro mahery no nanentana, naneho sy nizara ny talentany, eto amintsika, ireo mpanakanto avy amin’ny Cris de Paris, tarihin’i Geoffroy Jourdain. Maro ireo tonga nankafy ny vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ireo mpitendry vahiny sy ireo Malagasy mpihira.
Tsy zovina amin’i Fy Rasolofoniaina sy ny tariny intsony ny sehatry ny CC Esca etsy Antanimena. Na izany aza, manana ny mampiavaka azy hatrany ny seho entin’izy ireo, toy ny tamin’ny asabotsy tolakandro teo. Tsapa fa efa manana ny toerany ny kanto entin’izy ireo ary tafita ny hafatra raiketin’ireo hira ara-pilazantsara, izay efa tsy afaka am-bavan’ny maro, toy ny “Tiako ianao” sy ny “Mitonia”.
Nanatontosa: Fanou, Mamiherison, Landy R.